Saturday, 11 July 2020 10:24 am, Nepal
मेचीकाली : 2018-04-10 10:25:21
ओखलढुंगा, २७ चैत : ओखलढुंगामा ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने ठेकेदार विरुद्ध जनप्रतिनिधिले कारबाही अभियान सुरु गरेका छन् । निर्वाचित सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम नगर्ने ठेकेदार विरुद्ध कारबाही थालेका हुन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा लामो समयदेखि जिल्लामा ठेक्का लागेर पनि विकास आयोजनाका कामहरु सम्पन्न हुन सकेका थिएनन् ।
मेचीकाली : 2018-03-14 10:07:17
ओखलढुंगा, ३० फागुन : ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले भवन निर्माणका लागि निशुल्क जग्गा प्राप्त गरेको छ । साविक मुलखर्क गाविस वडा नं. ३ हाल सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ५ बस्ने राजु तामाङ र उहाँका श्रीमति सुनिता तामाङले १३ रोपनी जग्गा गाउँपालिकालाई निशुल्क प्रदान गर्नुभएको हो ।
मेचीकाली : 2017-12-09 08:39:48
ओखलढुंगा, २३ मंसिर : ओखलढुंगा जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनका यज्ञराज सुनुवार ३२ हजार ५८० मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ । नेकपा(एमाले)का सुनुवारका निकटतम प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले २७ हजार ३२७ मत प्राप्त गर्नुभएको ओखलढुंगाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कैलाश केसीले जानकारी दिनुभयो । ओखलढुंगामा सुनुवार र खतिवडा दुवै लोकप्रिय नेता भएकाले कडा प्रतिष्पर्धा हुने अनुमान गरिए पनि मतगणनाको शुरुवाती अग्रता लिनुभएका सुनुवार अन्ततः फराकिलो मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ ।
खिजीदेम्बा गाँउपालिकाका ९० घर १ महिनादेखि अध्याँरोमा
मेचीकाली : 2017-11-08 17:35:41
ओखलढुगां, २२ कात्तिक : ओखलढुगांको खिजीदेम्बा गाँउपालिकामा बिद्युत गृहमा समस्या आएपछि त्यहाँका ९० घरका उपभोक्ता अध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन् । खिजीदेम्बाको वडा नं ६ मा रहेको फेदीखोला लघुजलबिद्युत परियोजनाको गृहमा मदरबोर्डमा समस्या आएपछि त्यहाँका स्थानीयले १ महिनादेखि अध्याँरोमा बस्न बाध्य भएका हँन् ।
मेचीकाली : 2017-08-02 08:52:10
ओखलढुंगा, १८ साउन : आवास पुणनिर्माणका लागि ओखलढुगांको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको रगनीमा खटिएका प्राबिधिकले लाभग्राहीहरुबाट पैसा असुल्ने गरेका छन् । रगनीमा खटिएका असिस्टेन्ट सब इन्जीनियर कृष्णबहादुर पहरीले सोमबारबाट पहिलो किस्ता र दोस्रो किस्ताको फारम सिफारिस गरेबापत रकम उठाइरहेको स्थानीय भुकम्पपिडित नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।